Puntland oo soo saartay qoraal ay ku diidantahay sharci ay gadaal ka riixeyso dowladda dhexe – Hornafrik Media Network
Puntland oo soo saartay qoraal ay ku diidantahay sharci ay gadaal ka riixeyso dowladda dhexe
By Liibaan Nuur	 On Jan 10, 2020
Maamul goboleedka Puntland, ayaa si rasmi ah u qaadacay sharciga Batroolka Soomaaliya, oo ay meel-mariyeen labada Aqal ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland, ayaa lagu sheegay in sharciga Batroolka uusan waafaqsaneyn mabaadi’ida ku xusan Dastuurka KMG ah ee dalka, gaar ahaana qodobkiisa 44-aad oo qeexaya in qeyb-siga khayraadka dabiiciga ah ee dalka uu noqdo mid ku dhisan wada-xaajood dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.
Sidoo kale, qoraalka waxa lagu sheegay in qodobka 54-aad ee dastuurka Puntland uu sharcigaasi ka hor imaanayo, waxuuna dhigayaa qodobkaas in khayraadka dabiiciga ah ee ku ku jira deegaanada Puntland, ay ilaalintiisa iyo ka faa’ideysigiisa mas’uul ka tahay Puntland.
“Puntland waxay cadeynaysaa in aysan qeyb ka noqon doonin dhaqan-gelinta sharcigaas, ilaa inta ay wada-hadal isaga imaanayaan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka, si looga wada-xaajoodo sharciga”ayaa lagu yiri qoraaka ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland.
Hoos ka akhriso qoraalka oo dhameystiran:
Madaxweyne Dani oo DF u soo jeediyey talo ku aadan dhismaha Galmudug
Maxuu ku qotumaa safarka uu MW Farmaajo saakay ugu amba-baxay Eritrea?